नियमित सेक्स किन आवश्यक छ ? जानिराखौ - Purbeli News
नियमित सेक्स किन आवश्यक छ ? जानिराखौ
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र २२, २०७५ समय: १४:३७:०९
एजेन्सी । तपाईले विभिन्न समयमा सुुन्दै आउनुभएको होला की नियमित यौनसम्पर्कले स्वास्थ्यमा फाइदा गर्छ भनेर । त्यो सत्य पनि हो । तर नियमित यौनसम्पर्क नगरे चाहीँ के हुन्छ । यौन विशेषज्ञहरुका अनुसार नियमित यौनसम्पर्क नगर्दा शरीरमा विभिन्न मानसिक र शारीरिक समस्या देखा पर्न थाल्छ ।
दोष सरकारमा छैन – कांग्रेस नेता थापा
रवि लामिछाने हिरासतमै रहने, पुन ५ दिन म्याद थप